ओली पक्षको निष्कर्षः माथिल्लो तहका नेता मात्र प्रचण्ड-माधव खेमामा, कार्यकर्ता आफ्नैमा ! « Bagmati Page
ओली पक्षको निष्कर्षः माथिल्लो तहका नेता मात्र प्रचण्ड-माधव खेमामा, कार्यकर्ता आफ्नैमा !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ओली पक्षले निर्वाचन केन्द्रित माहोल बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिएको छ । आहिलेसम्म आफ्नो पक्षमा आधारभूत तहमै सोचिएभन्दा राम्रो हुँदै गाएको सो समूहको विश्लेषण छ ।